Isimo Sokumaketha Esivela Esihogweni - Amathani Wabaholi, Kepha Akukho Ukuthengisa | Martech Zone
Yize ukuba nomthombo ozinzile wokuhola sekuvele kuyinto enhle kunoma yiliphi ibhizinisi, ngeke kulethe ukudla epuletini. Uzojabula kakhulu uma ukuthengisa kwakho kubuya ngokulingana nombiko wakho omuhle we-Google Analytics. Kulokhu, okungenani ingxenye yalokhu kuhola kufanele iguqulelwe ekuthengiseni nakumakhasimende. Kuthiwani uma uthola amathani wokuhola, kepha akukho ukuthengisa? Yini ongayenzi kahle, futhi yini ongayenza ukuqondisa ukugcwaliswa kwethempeli lakho libuyele kuthrekhi yalo efanele?
Uma udidekile ngalesi simo, isinyathelo sakho sokuqala kufanele kube ukubuka kahle iwebhusayithi yakho kanye nemikhankaso yokukhangisa. Kungenzeka ukuthi omunye walaba bobabili akenzi okwanele ukuguqula izivakashi zakho zibe abathengi. Ngabe umkhankaso wakho uphathwa kahle? Kuthiwani ngewebhusayithi yakho? Ake sibheke lezi zimo ezimbili;
Isimo 1: Umkhankaso Ophethwe Kabi
Ukuthola ukuthi ngabe inkinga kungaba umkhankaso wakho wokumaketha, ungaqala ngokuyihlola kahle. Uma uqhuba umkhankaso wezikhangiso ze-Google, cabanga ngokubhekisisa umbiko wombuzo wakho wosesho. Awudingi ulwazi lochwepheshe ukuhlaziya lokhu. Uzobe ubheka imigomo esikhangiso sakho izivakashi eziyisebenzisayo ukuthola isayithi lakho. Ingabe zihambisana nalokhu okuthengisayo?
Ngokuyinhloko, abathengi bachofoza amagama wokusesha esikhangisweni esilingana nalokho abakufunayo. Kulokhu, uma uthengisa "izikhwama zesifazane", sebenzisa amagama okusesha nokuhlukahluka kwe-SEO okuhlukile kumkhiqizo wakho. Igama kusikhangiso sakho elifana "nezikhwama zesikhumba" noma "izikhwama zezintokazi" libanzi kakhulu futhi liyadukisa ngandlela thile. Lapho usukhombe igama elingukhiye elifanele lesikhangiso sakho, yiba nalo ku-URL yakho yokubonisa yazo zonke izikhangiso, isihloko somkhankaso nasencazelweni. Imiphumela yosesho izogqama amagama angukhiye ngaleyo ndlela ayenze ibonakale kakhulu.
Esinye isici somkhankaso esingaholela ekuguqulweni okungalungile uhlobo lomkhiqizo, ikhwalithi yokunikezwa nentengo oyinikezayo. Uma uzoqhuba umkhankaso womkhiqizo noma wensizakalo yakho, okungenani yenza ucwaningo lwakho kahle ukuze wazi izidingo zamakhasimende akho nokuthi yini umncintiswano wakho oyinikezayo. Qiniseka ukuthi umkhiqizo wakho unephuzu eliqinile olikhombisa ngokucacile ekunikezeni kwakho. Futhi, intengo mayincintisane ngokuya ngokuthi imakethe inani.
Isimo 2: Iwebhusayithi Engasebenzi kahle
Lapho usuyikhiphile into yomkhankaso noma ulungisa inkinga, umenzi wakho olandelayo kungenzeka abe yiwebhusayithi. Mhlawumbe iwebhusayithi yakho iheha ngokwanele. Kodwa-ke, aphumelela kangakanani amakhasi okufika? Kuthiwani ngomklamo wayo, ingabe uyasebenziseka? Kwesinye isikhathi, kungadingeka ukuthi ucabange njengekhasimende futhi uhlaziye lezi zinto ezilandelayo zesayithi lakho ngokombono wabo.
Design - Uma ubona ithrafikhi ephezulu engaholeli ekuguqulweni, mhlawumbe abantu bafika kuwebhusayithi yakho futhi bathola ukwethuka kwesiko. Ngokuqinisekile bazohamba! Zibuze ukuthi ngabe ukwakheka kwakho kwewebhu kufana nezitayela zamanje embonini yakho. Namuhla, ubuchwepheshe bukhula ngokushesha, futhi abantu bajwayela izinto zesitayela. Kulokhu, ukuba nesayithi elixakile futhi elingahambisani neselula ukucisha okuphelele. Vumela umklamo wakho unikeze umbono ofanele webhizinisi lakho futhi amaklayenti azonamathela isikhathi eside.
Imininingwane Yokuxhumana - Kumakhasimende, ukuba khona kwemininingwane yokuxhumana ecacile kuwuphawu lokuthi iwebhusayithi noma ibhizinisi liyiqiniso futhi lithembekile. Lokhu kwenza kudingekile ukufaka lokho kumklamo wakho. Qiniseka ukuthi ulayini wakho wocingo nama-imeyili owanikezayo ayagcinwa. Ngale ndlela, uma amakhasimende exhumana ungathola impendulo ngesikhathi esikahle. Kufanele ufake nekheli lendawo lebhizinisi lakho.
Amakhasi okufika - Leli yikhasi lokuqala izivakashi zakho elizofika ngaso leso sikhathi zichofoza izikhangiso zakho. Kulokhu, qiniseka ukuthi kusebenza kunoma yini oyikhangisayo. Uma bengakutholi abebekulindele, amathuba okuba bavele bashiye ikhasi. Isibonelo, uma amagama akho angukhiye “eyithuluzi lokuzenzakalela le-imeyili,” vumela la magama aholele ekhasini elinikeza imininingwane ngaleli thuluzi. Futhi, qiniseka ukuthi amakhasi akho okufika alayisha kalula futhi ahamba kakhulu.
Navigation - Kulula kangakanani ukuthi amaklayenti adlule emakhasini ahlukene wewebhusayithi yakho. Amakhasimende amaningi ashiya ikhasi ngokushesha uma eqaphela ukuthi achitha isikhathi esiningi ukuthola ukuthi yini ayifunayo. Kulokhu, yakhela amawebhusayithi akho ukuthi wonke amakhasi avuleke kalula. Futhi, amakhasi abalulekile njengalawo abonisa imikhiqizo nezinsizakalo, mayelana nebhizinisi, oxhumana nabo njalonjalo kufanele abonakale futhi atholakale kalula.
Shayela Kuyisenzo - Ukubizelwa Esenzweni kuyisango lokuya kokunye ukuxhumana okungenzeka ukuthi uba nakho nekhasimende elizoba khona. Lokhu kwenza kubaluleke ukwakha ama-CTA acacile nezinkinobho ezivelele ezifanayo. Vumela izixhumanisi ezinikeziwe ziholele esenzweni esilandelayo ofuna ukuthi amaklayenti akho asenze.
Uma ufuna ukuthuthukisa izingxoxo zakho, phatha idumela lakho lebhizinisi eliku-inthanethi. Lokhu kungenxa yokuthi amakhasimende kungenzeka afunde izibuyekezo noma aqhathanise amasevisi nemikhiqizo yakho nabanye. Ngalesi sizathu, hlala unikela ngezinsizakalo ze-stellar kepha yenza amaklayenti akho ukuthi ashiye impendulo kanye nobufakazi futhi. Zonke lezi zisizo zenza ibhizinisi lakho eliku-inthanethi libonakale lithembekile futhi lizothuthukisa i-CTR yakho.
Tags: ctrngaphakathimarketing kwangaphakathiamakhasi okufikaimikhondoimikhondo efanelekayowebsite design
Kuyini iWebrooming? Kwehluke kanjani Ekubonisweni?
Ukwenza Okuthandwa nguwe Ukumaketha: Izikhiye ezi-4 Zesisekelo Esiphumelelayo
Dec 27, 2016 ku-10: 50 AM
Isihloko esihle kakhulu uJamil, mema okuningi ongakucabanga ngakho.
Ukubingelela okuvela e-Alicante, eSpain.
Jan 18, 2017 ngo-8: 23 PM
Isikhathi esiningi, amakhasimende abheka kuqala ukubuyekezwa kwenkampani noma impendulo yelinye ikhasimende ngaphambi kokuthi aqhubeke nokubheka noma intshisekelo yokubheka amakhasi ahlukene wewebhusayithi yakho. Kubalulekile ukuphatha nokwenza ngcono isikhathi nesikhathi kokuqukethwe, nokubukeka futhi ikakhulukazi ingxoxo nokuxhumana kwakho namakhasimende afanele. Imikhankaso nemikhombandlela bekungeke kuthathwe njengokukhiqiza uma wenza okuthile, kepha awunayo imbuyiselo efanelekile yokuthengisa, ngakho-ke kubalulekile ukuphatha futhi ube nakho kokubili.